Iileta ze-Instagram zokuKhuphela kunye nokuncamathisela ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Oktobha 2, 2019 0 IiCententarios 98997
1 Chwetheza isicatshulwa osifunayo ebhokisini.
2. Khetha iifonti okanye iileta ozithandayo.
3 Khuphela kubo kwaye ubancamathisele kwi-Instagram yakho
Okwangoku i-Instagram yenye yenethiwekhi yokunxibelelana nokunxibelelana ngakumbi imihla ngemihla, abantu abaninzi basebenzisa le App ukufikelela kubantu abaninzi kwihlabathi liphela.
Yiyo loo nto sele kuyinto eqhelekileyo ukufuna ukuqaqambisa ngaphezulu kwe-800 yezigidi zabasebenzisi kwaye kufuneka ukwazi ukuba ilula mfa nekiso Akwanele. Kuyimfuneko ukuba ube nephakeji epheleleyo leyo: inkcazo yefoto +.
Kuba inkcazo ibaluleke kangaka, uyilo lwayo kufuneka lube lukhetheke ngokupheleleyo, ngokungangqinelaniyo enye yeendlela zokutshintsha uyilo kukusebenzisa oonobumba bentsusa abaya kunika umbono okhethekileyo kwiprofayili yakho. Ke yazi eyona ibalaseleyo Amagama e-Instagram ukukopa kunye nokuncamathisela.
Yintoni injongo yokutshintsha umthombo?
Imithombo ye Instagram Bayakuvumela ukuba ube neentlobo ezinkulu kwaye ushiye umgangatho oquka i-Instagram kwizinto zayo nganye. Sele kumabali i-Instagram inomsebenzi wokutshintsha ifonti nangona kunjalo kwizithuba eziqhelekileyo ayinalo ukusebenza.
Ngaba ngokwenene kubalulekile ukutshintsha olu hlobo lwefonti?
Ukuba yinto eyimfuneko ngokungqongqo ayisiyiyo, nangona kunjalo kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuba oku kunokukunceda ukuphucula inani lokujonga kunye nokuphendula onakho kwisithuba ngasinye sakho. Okwangoku kukho inani elikhulu labantu abasebenzisa ezi ntlobo zezixhobo ukuqaqambisa ushicilelo ngalunye.
Ngaba luhlobo luni loonobumba?
Iakhawunti ye-Instagram abaguquleli abaliqela banokukunceda ukutshintsha unobumba wesicelo, into oyifunayo kukukhuphela enye yezi ziguquli, ubeke igama leleta oyithanda kakhulu, bhala ibinzana ukuze ugqibezele ngokukopa kunye nokuncamathisela isicatshulwa upapasho.
Olu luhlobo lohlobo onokulusebenzisa:
Isibiyeli esimnyama 【A】 【E】 【I】 O O】 U】
Uthando L ♥ O ♥ V ♥ E ♥
Isibiyeli esimhlophe 『A』 『E』 『Mna』 O O 』U』
Ulwaphulo-mthetho αв ¢ ∂єfgнι נ кℓмиℓqяѕтυνωχуz
Ibhola emnyama 🅐🅑🅒🅓🅔🅕🅖🅗🅘🅙🅚🅛🅜🅝🅞🅟🅠🅡🅢🅣🅤🅥🅦🅧🅨🅩
Ezezimali ₳ ฿ ₵ ĐɆ ₲ ₲ J J J ₥ ₦ Ø Ø ₱ Ɽ Ɽ
Ukubetha kabini 𝔸𝔹ℂ𝔻𝔼𝔽𝔾ℍ𝕀𝕁𝕂𝕃𝕄ℕ𝕆ℙℚℝ𝕊𝕋𝕌𝕍𝕎𝕏𝕐ℤ
Isitayile esimnandi 1 αвc∂εғgнι נ кℓмησρqяsтυvωxүz
Ukubhala ngesandla 1 𝒜𝐵𝒞𝒟𝐸𝐹𝒢𝐻𝐼𝒥𝒦𝐿𝑀𝒩𝒪𝒫𝒬𝑅𝒮𝒯𝒰𝒱𝒲𝒳𝒴𝒵
Kwindawo yokujonga izinto
Yenza i-АБCДЄFGHЇJКГѪЙѲPФЯ $ TЦѴШЖЧЗ
Iminqwazi emincinci ᴀʙᴄᴅᴇғɢʜɪᴊᴋʟᴍɴᴏᴘǫʀsᴛᴜᴠᴡxʏᴢ
Usodusi ǟɮƈɖɛʄɢɦɨʝӄʟʍ ռօքզʀֆ ȶʊʋ ա Ӽʏʐ
Ezizodwa ᗩᗷᑕᗪ EᕼGᕼI ᒍ K ᒪᗰᑎ O ᑭᑫᖇᔕ T ᑌᐯᗯ᙭ ​​Yᘔ
Iimpawu ꍏ ♭ ☾◗ € ☾◗ ☾◗ ϰ↳♔ ♫ ⊙ρ☭☈ⓢ☋✓ω⌘☿☡
Krwela umgca ngaphantsi A̲B̲C̲D̲E̲F̲G̲H̲I̲J̲K̲L̲M̲N̲O̲P̲Q̲R̲S̲T̲U̲V̲W̲X̲Y̲Z̲
Icala elingezantsi ɐqɔpǝɟƃɥıɾʞlɯuodbɹsʇnʌʍxʎz
Zeziphi iileta eziguqulwayo ezikhoyo nge-Instagram?
Coolsymbol: ineemithombo ezahlukeneyo ze100 ze amabinzana owafunayo.
I-Sprezzkeyboard: Inesicelo kunye nomhleli wewebhu, inemithombo eyahlukeneyo ye-50.
I-Lingojam: Ungumhleli olula kunazo zonke kwaye unemithombo emininzi ye-Instagram.
Eyona nto ilungileyo kukuba ezi ziguquli zintathu zikhululekile.
Iileta zesakhiwo esenziwe kabini nge-instagram
Iileta eziqalekisayo ze-instagram
ℳ ℬ ℋ ℎ ℐ ℴ ℱ ℰ ℯ ℒ ℓ ℓ ℛ
Iileta ezisongelwe kwisangqa
Iileta ezikrwelelwe umgca ku-Instagram
Amanani asongezwe kwisangqa
Izangqa ezimnyama ezisongelwe ngamanani
Olunye usetyenziso onokulusebenzisa
Ukuba ngesizathu esithile ezinye izicelo zingakusebenzisi konke konke, siza kukushiya neminye imizekelo yezicelo onokuthi uqhubeke ukuzisebenzisa ukwenza zonke iintlobo zemithombo onokuyisebenzisa kupapasho lwakho, kwimbali yakho okanye kumagqabaza akho.
Ezinye zezi zicelo zinemisebenzi ethile yasimahla kwaye ezinye zihlawulwe, ke ngaphambi kokuba uyihlawule ngokupheleleyo, kungcono ukuzama uguqulelo lwayo lwasimahla kwaye uqinisekise ukuba ngaba sisicelo esifanelekileyo esilungele iimpapasho zakho kunye nokuphendula okunokwenzeka. abalandeli kunye nabo:
Yinkqubo enokwenza uhlengahlengiso oluninzi kwi-biography ye Instagram, Inamagama angaphezulu kwe-100 okutshintsha isicatshulwa kwanesiseko esincinci semizobo eyenziwe ngeesimboli kwaye unokutshintsha ukongeza ukuthanda kwakho kwiimpapasho zakho.
Esi sisicelo esilungileyo ngokwenene, sinelinye lawona manqaku aphezulu kwiVenkile ye App kwaye ineefonti ezingaphezulu kwe-30. Ikwanenombolo enkulu yeeleta ezihlawulwayo kwaye zisebenza kuyo nayiphi na inethiwekhi yezoluntu.
Usenokuba nomdla woku izakhelo ze-Instagram.
Esi sicelo sifana kakhulu nesibini esingaphambili. Nangona kunjalo, oku kunenzuzo enkulu kwaye le app inenani elikhulu lamazwi asimahla. Iifonti yenye yezona zisetyenziswa kakhulu kuba inefonti esetyenziswa kakhulu kwi-Instagram eguqulelwe kwiileta.
Sinethemba lokuba zonke ezi leta ze-Instagram ukukopa kunye nokuncamathisela ziya kukunceda ukuphucula uyilo lwenkcazo nganye kwi-akhawunti yakho ye-Intagram. Khumbula ukuba abaguquli basebenza kuphela ukuba ufuna ukutshintsha naliphi ibinzana okanye isicatshulwa, abawenzi umsebenzi kwisicelo kodwa kufuneka ukope kwaye unamathisele isicatshulwa esiguquliweyo.
Yiyo loo nto kufanelekile ukuba sizame ngazo naziphi na izixhobo esikunike zona kwaye usixelele ukuba kwenzeke njani kuyo nganye yazo kwaye ikusebenzele njani.
1 Yintoni injongo yokutshintsha umthombo?
2 Ngaba ngokwenene kubalulekile ukutshintsha olu hlobo lwefonti?
3 Ngaba luhlobo luni loonobumba?
4 Zeziphi iileta eziguqulwayo ezikhoyo nge-Instagram?
4.1 Iileta zesakhiwo esenziwe kabini nge-instagram
4.2 Iileta eziqalekisayo ze-instagram
4.3 Iileta ezisongelwe kwisangqa
4.4 Iileta ngokwahlulahlula
4.5 Iileta ezinesibindi
4.6 Iileta ze-Bubble
4.7 Iileta ezikrwelelwe umgca ku-Instagram
4.8 Amanani asongezwe kwisangqa
4.9 Izangqa ezimnyama ezisongelwe ngamanani
4.10 Amanani amancinci
5 Olunye usetyenziso onokulusebenzisa
5.1 Ikhibhodi yefonti
5.2 Ifonti epholileyo
NgoSeptemba 22, 2019
Isikhokelo se-IGTV: Yonke into ekufuneka uyazi ngeQonga leVidiyo elitsha le-Instagram
Oktobha 14, 2019
Funda ukusebenzisa i-albhamu yezithombe ze-Instagram
Ngubani ogcina iifoto zam kwi-Instagram?